खोरमा हुर्किँदै गरेकी १५ महिने पुष्पा - Sankalpa Khabar
1. कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाहीले शुक्रबार विश्वासको मत लिने
2. भारतसँगकाे पूर्वी नाका सिल
3. भारतमा कोरोना संक्रमण १० दिनमै दोब्बर, एकै दिनमा २ लाख भन्दा बढी संक्रमित
4. मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ताको तयारी भएलगत्तै गण्डकी प्रदेश सभाको चालू अधिवेशन अन्त्य
5. अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फिर्ता गर्ने राष्ट्रपति बाइडेनको घोषणा
6. सुनको मुल्यमा सामान्य बृद्धि, कति छ आजको मुल्य
खोरमा हुर्किँदै गरेकी १५ महिने पुष्पा
१६ चैत्र १७:२९
चितवन । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मुख्य क्षेत्रबाट उद्धार गरेर ल्याइएको ‘पुष्पा’ मानिसको अभिभावकत्वमा हुर्किँदै आएकी छिन् । पुष्पालाई साढे १४ महिनाअघि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्ने नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)को तमासपुर क्षेत्रबाट उद्धार गरेर ल्याइएको थियो ।
माउसँग बिछोडिएकी दुर्लभ एकसिङ्गे गैँडाको बच्चा (केटी)पुष्पालाई गत वर्षको माघ ३ गते उद्धार गरिँदा उनी जम्मा १२ दिनकी थिइन् । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटिएनसी) लगायतको टोलीले उनलाई तमासपुर क्षेत्रको दलदलबाट उद्धार गरेको थियो ।
दलदलबाट उद्धार गरेर माउसँग भेट हुने आशमा पुष्पालाई दुई दिन सोही ठाउँको सुरक्षित स्थानमा राखिएको भए पनि माउ लिन नआएपछि पुष्पालाई माघ ५ गते सौराहा लिएर आइयो ।
पुस महिनामा जन्मिएकी र केटी भएकाले उनको नाम पुष्पा राखिएको हेरचाहमा खटिएका राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका वन्यजन्तु प्राविधिक लालबहादुर महताराले बताए । “उद्धार गर्दा १२ दिनकी पुष्पा अहिले करिब १५ महिनाको पुगेकी छिन्”, महताराले भने, “सुरुदेखि नै मैलेमात्रै हेरचाह गरेको भएर होला अरुसँग खेल्न र चर्न जान मान्दिनन् ।” उद्धार गर्ने बेलामा पुष्पाको टाउको मात्रै बाहिर निस्किएको थियो भने बाँकी शरीर पूरै दलदलभित्रै फसेको महताराको भनाइ छ ।
पुष्पाको प्राकृतिक घर चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज भए पनि उनी अहिले घरपालुवाजस्तै भएकी छिन् । पन्ध्र महिने चञ्चले पुष्पा अहिले एनटिएनसीको परिसरभित्रै खेल्ने तथा वरिपरि उम्रिएका हरिया घाँसपात खाएर आफ्नो पेट भर्ने गर्छिन् । “यहाँ वरिपरि चरेको आहारले मात्रै पुष्पाको पेट भरिँदैन”, महताराले भने, “पुष्पालाई दैनिकरूपमा अलिपर लगेर चराउने गरेको छु, यसका साथै उनलाई एक किलो कुँडो तथा अन्य खाना पनि पकाएर खुवाउने गरेको छु ।”
खोरमा रात बिताउने पुष्पा बिहानै खोरबाट बाहिर निस्किएर चर्न थाल्छिन् । “केही बेर चरेपछि उनलाई पानी खुवाउन तथा एकछिन हिँडडुल गराउन बिहान ११ बजेतिर नजिकैको ढुङ्ग्रेखोलामा लिएर जान्छु”, महताराले भने, “ढुङ्ग्रेखोलामा पानी खाएर त्यहाँ वरिपरि चरेपछि दिउँसो ३ बजेतिर फेरि एनटिएनसीमा लिएर आउँछु ।” पुष्पालाई सुरुवाती अवस्थामा दूध, सक्खर खुवाउनुपरेको भए पनि अहिले कुँडो र बन्दाजस्ता आहार खुवाउने गरिएको महताराको भनाइ छ ।
“पुष्पाले घाँस खान सुरु गर्नु अगाडिसम्म उनलाई दैनिक २० लिटरसम्म दूध खुवाउने गरिन्थ्यो”, महताराले भने, “सात महिनाको हुँदासम्म दूधका साथै पौष्टिकतत्व ल्याक्टोजिन खुवाएर पालिएको हो ।” पुष्पाको खानपानका लागि अहिले दैनिक ७ सय खर्च हुने महताराले बताए । उनको हेरचाह र पालनपोषणमा अहिलेसम्म तीन लाख ५० हजार खर्च भइसकेको उनले बताए ।
पुष्पालाई केही महिना पहिले जङ्गल लगेर छाड्ने कुरा उठेको भए पनि अझै एक वर्ष एनटिएनसीमै राखिने भएको छ । पुष्पाले आफूलाई हिङ्स्रक जनावरबाट बचाउन सक्ने भएपछि मात्रै उनलाई प्राकृतिक बासस्थानमा लगेर छाड्ने तयारी भएको महताराले जानकारी दिए । “पुष्पाको खाग उम्रिएको छैन, त्यसैले उनले आफूलाई अरुको आक्रमणबाट जोगाउन सक्दिनन्”, महताराले भने, “पुष्पाले आफूलाई आक्रमणबाट जोगाउन सक्ने भएपछि मात्रै निकुञ्जमा लगेर छाड्ने कुरा भएको छ ।”
पुष्पा एनटिएनसीको परिसरमै मान्छेहरुसँग घुलमिल भएर बस्न रुचाउँछिन् । पुष्पाकै कारण यहाँको रौनकसमेत बढेको छ । मान्छेहरु टाँसिएर सेल्फी खिच्दा पनि पुष्पाले केही गर्दिनन् । झर्को लागेको बेला भने रिसाएर मान्छेलाई धकेल्ने गरेको महताराले बताए ।
पछिल्लो समय पुष्पासँग सेल्फी खिच्न मान्छे आउने गरेको भन्दै महताराले जनावरलाई माया गर्नुपर्ने भए पनि उनीहरुसँग सेल्फी खिच्ने, जिस्काउनेजस्ता काम गर्न नहुने बताउँछन् । पुष्पा बढ्दै गएपछि राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको परिसर साँघुरो बन्न थालेको छ । “पुष्पालाई अहिलेको अवस्थामा दौडन, खेल्न र चर्न करिब एक किलोमिटरभन्दा बढीको वृत्ताकार क्षेत्रफल आवश्यक पर्छ”, महताराले भने, “अहिले यहाँ ३ सय मिटरको वृत्ताकार क्षेत्रमात्र छ ।”
“बच्चाकै उमेरको भएकाले मानिससँग खेल्न खोज्ने पुष्पाको बानी छ, उनी अलि चकचके हुनुका साथै मेरो पछिपछि दौडिन्छिन्”, महताराले भने, “खानेकुरा पनि मैले दिए मात्र खाने बानी परेको छ ।” सामान्य अवस्थामा कुनै पनि जीवजन्तुले मान्छेलाई आक्रमण गर्न नआउने भन्दै उनले वन्यजन्तुलाई जिस्काउन वा हिर्काउन नहुने बताए ।
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका प्रमुख डा.बाबुराम लामिछानेले पुष्पालाई अबको एक वर्षपछि मात्रै जङ्गलमा लगेर छाड्ने योजना रहेको बताए । अहिले पुष्पा सानै भएकाले अन्य जनावरको आक्रमणबाट आफूलाई सुरक्षित राख्न नसक्ने हुँदा उनलाई आफूहरुकै संरक्षणमा राखिने लामिछानेले बताए । खासगरी साना वन्यजन्तु बाघको आक्रमणबाट पर्ने बढी खतरा हुने भएकाले पनि पुष्पालाई तत्कालै जङ्गलमा लगेर छाड्न नसकिने उनको भनाइ छ ।
“प्राकृतिक संरक्षण कोषका पशु चिकित्सकबाट पुष्पाको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण हुँदै आएको छ”, लामिछानेले भने, “अहिलेसम्म पुष्पाको स्वास्थ्य अवस्था एकदमै राम्रो भएको हामीले पाएका छौँ ।” कोषले टुहुरा वन्यजन्तुको उद्धार तथा संरक्षण गर्दै पुनः जङ्गलमा नै लगेर छाड्ने गरेको लामिछानेको भनाइ छ ।
गुलाफ काँडासँगको दैनिकी : ‘पेशाप्रति खुसी र उत्साहित छौँ’
१ बैशाख ११:२४
स्वतन्त्रता र खुुुुसी खोसिएको वर्ष २०७७
३१ चैत्र १९:२०
जेठदेखि बञ्चरेडाँडामा फोहर विसर्जन गर्न सकिने
२८ चैत्र १४:४४
लयमा फर्किए विकास आयोजना
२८ चैत्र १३:३१
२ बैशाख १२:१३
मौलिक सिर्जनाबाट मुलुकको प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्र्नुपर्छ : राष्ट्रपति भण्डारी
२ बैशाख १८:४९
२ बैशाख १८:४४
२ बैशाख १८:३७
२ बैशाख १८:२४
२ बैशाख १८:१८
ब्राजिलमा कोरोनाबाट मृत्यु हुने व्यक्तिको संख्या तीन लाख ६०…
२ बैशाख १८:१२
त्रासबाट कहिल्यै प्रभावित हुन्न : भुसाल
२ बैशाख १८:१०